Iingcebiso zobuhle kuMqondiso wakho weZodiac - Khetha Uphawu
Iingcebiso zobuhle kuMqondiso wakho weZodiac
Kukho ubuhle kunye nomlingo kuwo wonke umqondiso wezodiac, kunye neendlela ezifanelekileyo zokuba ngamnye wabo abonise ukukhanya kwangaphakathi. Ukujonga indawo yakho Ilanga , yakho IVenus kunye ne-Ascendant yakho, unokufunda ukuvakalisa iimpawu zakho ngesimboli esisisiseko kunye nomlingiswa wophawu ngalunye. Xa ezi zikhundla zikhuliswa, zixatyiswa, kwaye zamkelwa, ukuzithemba komntu kunye nokuzixabisa kuya kukhula. Uphawu ngalunye luziva ngcono kwimbonakalo yalo yendalo kwaye kufuneka lulandele ubume balo bokwenyani endaweni yokuzama ukufihla ukuba bangoobani kanye kanye.
Bubuhle obukrwada be Aries leyo itsala amehlo, ukomelela kwabo kwesimilo kunye nondoqo wabo onomdla. Xa i-Aries izama kakhulu ukubonakala ithozamile okanye izolile, itsibela kwinkcaso yentswelo yabo yokuqala, kwaye bacime amandla abo kunye nemvakalelo yabo yokwenyani yokwaneliseka kunye nokuzithemba. Ngokukhawuleza ukuba bafunde ukuba bonke abantu abalungileyo banamathele kubo ngenxa yesimo sabo kwaye kungekhona nangona kunjalo, baya kufumanisa ukuba imfashini yabo inemibala emininzi kwaye ivulekile kunokuba bakhethe ukuqala. I-Aries kufuneka ikhethe imibala eqaqambileyo, iinjongo zasentlakohlaza, izixhobo zendalo kunye nezihlangu ezikhululekile. Okumnyama kunye nomdaka kufuneka kuphetshwe, kwaye ulusu lwabo lunyanyekelwe ngalo lonke ixesha okanye lunokubonisa ububomvu, amaqhakuva, okanye abe novelwano kumbilo nakwimisebenzi yomzimba.
Ngamnye Taurus zintle ngenxa yokuba zikwazi ukunandipha ubomi, ukutya, ukubamba, nazo zonke izivamvo zazo ngokupheleleyo. Ingxaki iya kuvela xa beziva bebuhlungu ngobunzima babo okanye ukonqena kwabo bengaqondi ukuba bazalelwe kweli hlabathi ukuze bakhuthaze abanye ukuba banandiphe ubomi. Ukuvumela ukuya kwiimvakalelo zomzimba, akufuneki ukuba benze okuninzi ukubonisa ubuhle babo. Iimpahla zabo zinokuba zezobuqhelekileyo, zendalo, ezimhlophe, ezithambileyo, okanye iithoni zasemhlabeni, ezithambileyo ukubamba kunye nokuziva eluswini lwabo usuku nosuku. Ziyi-Self yazo ekhangayo kakhulu xa zikhululekile kwaye akufanele zizame kakhulu ukuba zigqoke kwizinto zokwenziwa, i-polyester lace, okanye izicathulo eziphezulu zesithende. Abasetyhini abazalelwa kulo mqondiso bahle kakhulu nge-makeup ecacileyo, okanye ngaphandle kwayo ngokupheleleyo. Eli lelona cala labo lenzalelwane, elibuthathaka, nelona lisondeleleneyo kuko konke abanye abakufumanayo kuthomalalisa kwaye kumema ukuba bachukunyiswe.
Ubuhle bayo yonke into Gemini kukungakhathali, ukukhanya kunye nendalo yabo yobuciko. Baphethe umyalezo kwihlabathi kwaye nangona banokubonakala kwabanye abantu abaphantsi komhlaba, akufuneki batshintshe ukuhlangabezana nolindelo lomntu. Ukwazi kwabo kakuhle kunye nentlalontle yabo ibanika yonke into abayidingayo ukuze bahende kwaye batshayele abanye ezinyaweni zabo, bebanika umdla wokwazi, ukuzithemba, inkangeleko yobuntwana elandelwa bubulumko kunye nokukhanya okwaneleyo. Isimbo sabo kufuneka sitshintshe ngokweemvakalelo kwaye ikhabethe labo lidinga izinto ezininzi ezahlukeneyo. Akukho mini iyafana neGemini kwaye amandla abo alele ekuqapheliseni utshintsho oluncinci lwemihla ngemihla oluzalisekisa ubukho babo. Abafanele bacwangcise iimpahla zabo zeveki yomsebenzi okanye kwangomso, kwaye bafanele bahlale benamathele kwimvakalelo yelo xesha. Banokubukeka belungile phantse kuyo yonke into, okoko nje belandela iimvakalelo zabo zangaphakathi kunye nendalo yabo yangaphakathi eguqukayo.
Owona mgangatho unomtsalane a Umhlaza kukutyibilika, inkathalo, novelwano ngokweemvakalelo. Eyona nto imbi kakhulu abanokuyenza kukuguqula imibala evaliweyo okanye emnyama, kwaye umlingiswa wabo ngokucacileyo uxhasa i-pastel shades, imibala ekhanyayo, iintyatyambo kunye neenjongo zendalo, okanye iimpahla zemveli, kungekhona kwilizwe labo ukuba ngaba ngabahambi behlabathi. Ukuba baqala ukulahla isimilo sabo sokwenyani, berhabaxa kwiimvakalelo zabo kunye neemvakalelo zabo, ukuzithemba kwabo kuya kuncipha kwaye baya kuziva ngathi abakho kweli hlabathi. Abananto yokungqina kulo lonke uluntu kwaye kufuneka bakhanyise kobona buntu babo bubuthathaka, kodwa obunamandla ngokweemvakalelo. Ukuqonda abanye kubenza bazithembe yaye kubavulele iindima ebebefanele ukuzithabatha, babe nomtsalane kwabo bafuna ububele, inkxaso nothando lwabo.
Sonke siyazi ukuba ukuzithemba Leo ngumboniso kwaye uhlala engumntu onqwenela ukuqaqamba. Imvakalelo yabo yangaphakathi yamandla yeyona nto ibahlulayo, kwaye ziinwele zabo kunye nenkangeleko yabo yonke elungelelaniswe kakuhle ebabonisa ukuba bangoobani na. Kufuneka bonwabele ubucwebe obunomtsalane, igolide kunye neenkcukacha eziqaqambileyo entanyeni yabo, kwaye ngenene… naphi na. Siza kubona ukuba iiLeos ezininzi ziyakuthanda ukugcina inkangeleko yazo ilula kwaye iphantsi eMhlabeni, kwaye olu lolona khetho lufanelekileyo kwabo bangazamiyo ukuzifihla kwihlabathi ngokudibanisa. Ukuziva belungile ngokwenene ngokwabo, kufuneka babe bakhaliphe kwaye bajongane nehlabathi, benxibe nantoni na ebakhuthazayo kwaye ikhuphe ukungxama kwabo kokuyila. Yonke into esuka kwi-miniskirt ebomvu ebomvu yomtshakazi we-Leo, kwi-jacket ye-fluorescent enezicathulo ezihambelanayo zomyeni we-Leo, kufuneka ibe yinto evulekileyo. Ukusikelwa umda kukhupha amandla kubo yaye logama nje bekhululekile ukuba bathande oko bakuthandayo, banxibe oko bakuthandayo, baze bakhanye kwinyaniso yabo yobuqu, baya kutsala ingqalelo yabaninzi.
Kukho into ekhazimlayo kulaa mbonakalo icocekileyo, i-ayiniwe ye Virgo . Ayikokufuna kwabo ukugqibelela okungako okutsala amehlo, kodwa kunokuba bubulumko, inkangeleko ecocekileyo kunye nomdla abawuvayo ngomsebenzi wabo, iincwadi zabo, okanye nayiphi na into yokuzonwabisa abayikhulisayo. Inkathalo kwaye imile kakuhle, yonke iVirgo inomtsalane kakhulu xa isaphula inkangeleko eqinileyo ngeenkcukacha ezimibalabala, intshukumisa enzulu yeentyatyambo kwiqhina okanye isikhafu, okanye ibhanti elityheli esinqeni sabo. Ukuba ngumqondiso apho iVenus iwile, kwaye ibhinqa ngokwaneleyo ukuba libekwe ngaphandle kweempawu ezikhangayo zeendima zamadoda, iVirgo inenkathazo yokubonisa icala labo elikhangayo. Kufuneka baphumle, bakhulule amanqe abo, bancume, baze bakhululeke kwilizwi elibaxelela ukuba kusekho enye into ekufuneka bayiphucule. I-Virgo ethembekileyo iya kuba neentloni, kodwa yintloni kunye nokulumkisa okubangela umdla kwabanye abantu, kunye nomdlalo wengqondo wekati kunye nempuku uya kunika i-Virgo kunye neqabane labo elikhethiweyo lonke ulonwabo abaludingayo.
Ukusebenzisa amacala omabini eVenus, yonke into Iponti Kufuneka igcine unyawo olunye ubuncinane emhlabeni. Kukwindalo yabo ukuhenda, ukutsala, kunye nokucaphukisa, kwaye oku kunencasa kuphela kwabo bangondliyo ukuzithemba kwabo okutyumkileyo ngokuziphatha okunjalo. ILibra ihlala ibonakalisa ubume bokulingana kwangaphakathi ngembonakalo yangaphandle, kodwa ihlala inikezela ngoloyiko lwezimvo zabanye abantu. Into ebalulekileyo kukugcina izithintelo ngokubanzi kangangoko kunokwenzeka, okanye banokujika kumbala ohambelana negrey kunye negrey kuba oku kubanceda bazive ngathi bayahambelana neqela. Obo buchule bobuntu beLibran bubanika ukulunga kunye nokukhanya okutsala abanye, hayi umnqweno wabo wokuhlangabezana nokulindelweyo kokusingqongileyo. Kufuneka bakhethe umbala ngaphezu kokungabi nawo, kwaye naxa umnyama, bafake isiqholo esenza intliziyo yabo ixhume. Abasoze benze ukhetho olungalunganga lwempahla, kwaye umgangatho wabo onomtsalane kubo bonke - uncumo lwabo olunyanisekileyo.
Kukho umoya woxolo kubunzulu be I-Scorpio kufuneka bazi ngokupheleleyo yonke imihla. Le ngongoma yokulawula kunye nokulawula okupheleleyo yinto eyenza ukuba ibe yimagnethi kwabanye, kwaye konke okufuneka bafunde kukuqonda ukuba oku akusiyo i-negativity yabo, kodwa amandla abo. I-Scorpios inokunxiba yonke into abanye abanokuba ngcono ngaphandle kwayo, kubandakanya zonke iimpahla ezivuselelayo, isikhumba, izimonyo ezibukhali kunye ne-lipstick ebomvu yegazi. Kubonakala ngathi kukho imfuno enzulu kwezinye iiScorpios zokunxiba umnyama, kodwa oku kusenokuthetha ngemeko yabo yokukhanyela ngokweemvakalelo kunye nokuzitshabalalisa okungathandekiyo kwabanye njengoko kunokubonakala. Sisidingo sothando esibenza bahluke kwisihlwele kunye nomgangatho onzulu weemvakalelo abazinikelayo. Yonke enye into ixhomekeke kwimvakalelo yabo yangaphakathi yokhuseleko.
Ukuhleka, ulonwabo, ithemba, kunye nobubanzi bengqondo iseti yonke into Sagittarius ngaphandle kwesihlwele. Umtsalane wabo ufihla kwiimeko ezihlazo kakhulu, kuba yilapho zikhanya khona, ziqonda ngokupheleleyo ukuba zilungile njengoko zingafezekanga. Olu luphawu lwempahla enemibala kunye nesibindi, indibaniselwano yanamhlanje, kwaye banokutsala phantse nantoni na ixesha elide besazi ukulinganiselwa kwabo kunye neentsilelo. Isibonakaliso esihlala sihlupheka nge-pink goggles syndrome, yonke i-Sagittarius idlula kwinqanaba lobomi apho bengaqinisekanga ukuba kukho into enambithayo, inyanisekile kwindalo yabo, okanye ixhasa iziphene zabo zomzimba. Oku kunokukhokelela ekuzibulaleni kwefashoni kunye nokukhetha okungalunganga kwe-makeup, iziqholo, kunye noxinzelelo kumfanekiso wabo uwonke. Xa benyanisekile kubo malunga nenkangeleko yabo, ngequbuliso bayazi kakuhle into ehamba nomzimba wabo kunye nohlobo lweenwele, okanye ukumila kobuso babo. Baza kuzama kakhulu bade bafumane isikhokelo sabo, kwaye bakuba bekwenzile, baya kubonisa ngekratshi ubuntu babo obukhazimlayo kwihlabathi, obunomtsalane njengoko iSagittarius ifumana.
Ukuba a Capricorn ufuna ukungathandeki, bahlala bejika ekunxibeni i-T-shirt emnyama, ehlanjwe, endala. Nangona ubuhle buvela ngaphakathi, kufuneka buhlale bukhuliswa ngemvakalelo yokuzithanda ngaphandle kwaye ngaphandle kombala, oku kuya kuba nzima ukufezekisa. Ubuqili kunye nocwangco kuzisa iinkcukacha ezichanekileyo zeCapricorn nganye ukuba igxininise. Aba ngabantu ekufuneka banxibe iithowuni zasemhlabeni kwaye bahlala bejongeka ngcono ngokuluhlaza, iindibaniselwano ezimdaka ngebala kunye nenani elifanelekileyo lobomvu, imagenta, okanye ipinki. Ngokuxhomekeke kwindlela yabo yokulondoloza, banokuthi baphantsi kakhulu, njengokungathi bayoyika ukubonisa ubuntu babo. Ukuba kunjalo, izinto kufuneka zitshintshe kwaye kufuneka zifunde ukuziva zikhululekile ngokubukeka kwazo, ziqonda ukuba imida ibekwe kwisimo esinamandla sangaphakathi, kwaye kungekhona kwikhowudi yokugqoka. Ezona mpawu zabo zinomtsalane ngamabhongo kunye namandla obuntu, kwaye yile nto inkangeleko yabo kufuneka ibonise, kodwa ngokuqukuqela okwaneleyo kunye nokuguquguquka ukuvumela omnye umntu ukuba angene kwihlabathi labo.
Owona mgangatho unomtsalane kuzo zonke Aquarius bubuntu babo kunye nokungaqhelekanga kwabo. Ukuzama kanzima ukulwa nalo, abayi kuziva belungile nakubani na, kwaye nokuba oku kubanceda bafaneleke kakuhle okanye bahlangabezane nokulindela komntu, akuyi kubavuyisa. Uhlala uthandana namanqaku anomoya, i-perfume entsha, kunye nento eqhelekileyo kunye nemidlalo kwaye kodwa i-asymmetrical kunye nenhle, i-Aquarius ikwimo yabo efanelekileyo xa inxibe into evuyisayo ngayo. Abadingi igunjana eligcwele izinto, bafuna nje yonke enye into ekhuthazayo kwaye ibenze bazive belungile. Abantu abazalelwe kulo mqondiso wezodiac sele bezalelwe ukuba bagqame kwaye bahluke kwihlabathi liphela, beshukumisa iinkqubo zabo babangqongileyo. Esi sizathu sokuba bazive bengcono kakhulu kwiimpahla ezingabeki bahlukileyo njengoko ubuntu babo kunye namazwi abo benzayo. Ukuvakalisa kunye nokukhwaza, okanye ngokukrakra kunye nokuzola kancinci, yonke i-Aquarius kufuneka ivumele amandla abo abonise ngokuphandle ukuba yeyona nto inomtsalane.
Ubume bephupha bokuhenda IiPisces ifihla umtsalane wayo omkhulu kwindlela yobuntwana kunye nenemibala yobomi. Xa uphila ubomi ngombala, umntu unokukhetha nawuphi na umbala ohambelanayo, kwaye siya kuqaphela abafazi bePisces ngezigaba zobomi ezinemibala ebomvu, izicathulo eziluhlaza ze-satin, okanye ibhanti elibanika umgca. Amadoda aya kuba ngovelwano lobudoda, kwaye asoloko enevumba elimnandi, exhomekeke kwibali elibaliselwayo okanye kwisijekulo sothando, kunenkangeleko yawo. Ukuphakanyiswa kukaVenus kuya kubakhokelela ekubeni bachithe zonke iimvakalelo eziza ngendlela yabo, kwaye kungakhathaliseki ukuba i jeans entsha okanye ibhegi entsha, baya kulungelelanisa ubomi babo malunga nayo ixesha elide njengoko isenza intliziyo yabo ixhume. I-Pisces kufuneka ihlale ihleli kuhlobo oluthile lokulinganisela, kuba izimonyo ezininzi kunye nokutshintsha imibala kunika ingcamango yokuzifihla kunokuba uzinzo. Bafanele bakhazimle kangangoko befuna, banxibe iileyisi ezintle kunye nejezi ephuphileyo efanelekileyo, izithende eziphakamileyo xa besiya kwiklabhu, kodwa bajike kwiipjama zomqhaphu ekhaya xa usuku luphelile.
Isagittarius Khetha Uphawu Iponti I-Scorpio Iiary